Martiqaad Boqortooyada Ilaah, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Qof kastaa wuxuu leeyahay fikrad sax ah iyo khalad, qof walbana wuxuu horay u sameeyay wax qaldan xitaa marka loo eego fikradiisa. Hadal caan ah ayaa yidhi: Qof kastaa weligii wuu ka xumaaday saaxiib, ballan buu jabay, wuxuu dhaawacay dareenka qof kale. Qof walba wuu ogyahay dambiga.
Sidaa darteed dadku ma rabaan inay wax ku yeeshaan Ilaah. Iyagu ma doonayaan maalinta xukunka maxaa yeelay waxay og yihiin inaysan Ilaah hortiisa istaagi karin iyagoo leh qalbi saafi ah. Waxay yaqaaniin inay isaga addeecaan, laakiin waxay kaloo ogyihiin inayna addeecin. Waxaad dareemaysaa xishood oo waxaad dareemaysaa dambi. Sidee deyntooda dib loogu soo furan karaa? Sidee maskaxda loo nadiifiyaa? "Dambi dhaafku waa rabbaani," ayuu ku soo gabagabeeyey ereyga muhiimka ah. Waa Eebbe naftiisa Dhaafa.
Dad badan baa og oraahdan, laakiin ma aaminsana in Eebbe yahay mid ku filan inuu cafiyo dembiyadooda. Waxaad wali dareemaysaa dambi. Waxay wali ka baqayaan muuqaalka Ilaah iyo maalinta xukunka.
Farriinta Ciise, farriinta iskutallaabtu, waxay war wanaagsan u tahay dhammaan kuwa dembiilayaasha ah. Ciise, Ilaah iyo nin qudha, ayaa aqbalay ciqaabteenna. Cafis waa la siiyaa dhammaan kuwa is-hoosaysiiya oo ku filan inay rumaystaan ​​injiilka Ciise Masiix. Waxaan u baahanahay warkan wanaagsan. Injiilka Masiixu wuxuu keenaa nabada maskaxda, farxad iyo guul shaqsiyeed.
Injiilka runta ah, warka wanaagsan, waa injiilka Masiixa ku wacdiyey. Isla injiilkii waxaa dirtay rasuulladii: Ciise Masiix, iskutallaabta lagu qodbay (1 Korintos 2,2), Ciise Masiix xagga Masiixiyiinta, rajada ammaanta (Kolosay 1,27), sarakicidda kuwii dhintay, farriinta rajada iyo badbaadada aadanaha. Kanu waa injiilka boqortooyadii Ilaah ee Ciise ku wacdiyey.
Akhbaarta wanaagsan ee qof walba
"Laakiin markii Yooxanaa la qabtay kadib, Ciise wuxuu yimid Galili wuxuuna dadka ku wacdiyey injiilka Ilaah, isagoo leh: Wakhtigii waa yimid, oo boqortooyadii Ilaah waa timid. Toobad keena oo toobad keena oo rumaysta injiilka! » (Markos 1,14:15 ”XNUMX). Wacdigan uu Ciise keenay waa "war wanaagsan" - farriin "xoog badan" oo beddeleysa oo beddeleysa nolosha. Injiilku kaliya ma beddelo oo waa beddelo, laakiin wuxuu aakhirka xanaaqi doonaa qof kasta oo diida. Injiilku waa "xoogga Ilaah oo ka farxiya kuwa isaga rumeeyey oo dhan" (Rooma 1,16). Injiilku waa casuumada uu Ilaah noogu yeeray si aan ugu noolaano heer gabi ahaanba ka duwan. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in ay jirto dhaxal ina sugaya oo si buuxda noo lahaan doona marka Masiixu soo noqdo. Waxa kale oo ay martiqaad u tahay xaqiiq ruuxi ah oo xoog leh oo durba annaga iska leh. Bawlos wuxuu ugu yeedhay injiilka "Evan" gelium Masiixa " (1 Korintos 9,12).
"Injiilka Eebbe" (Rooma 15,16) iyo "Injiilka Nabadda" (Efesos 6,15). Laga bilaabo Ciise, wuxuu bilaabayaa inuu sharraxo aragtida Yuhuudda ee boqortooyada Ilaah, isagoo xoogga saaraya macnaha guud ee imaatinka Masiixa. Ciisena wuxuu ku socday jidadka boodhka ah ee Yahuudiya iyo Galili, Bawlos wuxuu barayaa, hadda inuu yahay "Masiixa sarakiciyay" ee ku fadhiya midigta Ilaah oo isna ah "madaxa xoogga iyo xoogga oo dhan" (Kolosay 2,10). Sida ku xusan Bawlos, dhimashada iyo sarakicidda Ciise Masiix waxay ku yimaadaan "ugu horrayn" injiilka; waa dhacdooyinka ugu muhiimsan ee qorshaha Eebbe (1 Korintos 15,1: 11). Injiilku waa warka wanaagsan ee loogu talagalay dadka saboolka ah iyo kuwa la dulmay. Ugudambeyn, sharcigu wuu guuleysan doonaa, maahan xoog.
Gacantii ayaa lagu garaacay gacanta feedhka. Boqortooyada sharku waxay siisaa boqortooyadii Ciise Masiix, amarro waxyaalaha Masiixiyiintu mar horeba la kulmayeen qayb ahaan.
Bawlos wuxuu hoosta ka xarriiqay qaybtan injiilka kuwa Kolosaylos ah: «Waad ku mahadsan tihiin Mahad oo idinka dhigay mid karti u leh dhaxalka quduusiinta nuurka. Wuxuu inaga badbaadiyey xoogga gudcurka wuxuuna ina geliyay boqortooyadii wiilkiisa qaaliga ah, kaas oo aan ku badbaadi karno, kaas oo ah cafiska dembiyada » (Kolosay 1,12:14 iyo).
Masiixiyiinta oo dhan, injiilku wuxuu u ahaa xaqiiq iyo rajo mustaqbalka. Masiixa sarakiciyay, Sayidku waa waqti, meel iyo wax kasta oo halkan ka dhaca, waa horyaal u ah Masiixiyiinta. Kan jannada loo korsaday waa isha awoodaha jirta (Ef3,20-21).
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in Ciise Masiix uu ka adkaaday caqabad kasta oo ku haysa noloshiisa dunidan. Jidka iskutallaabtu waa hab adag laakiin guul u leh boqortooyada Ilaah. Taasina waa sababta uu Bawlos u soo koobi karo injiilka si kooban, “maxaa yeelay waxaan mooday inay sax ahayd inaanan dhexdiinna ka ogaanin laakiin aan ahayn Ciise Masiix oo iskutallaabta lagu qodbay oo keliya” (1 Korintos 2,2).
Markuu Ciise ka muuqday Galili oo uu si adag injiilka ugu wacdiyey, wuxuu filayey jawaab. Isaguba isagaa jawaab naga sugaya maanta. Laakiin casuumadii Ciise ee ahayd inay boqortooyada soo gasho looma hayn meel bannaan. Wicitaankii Ciise ee Boqortooyada Ilaah waxaa weheliyey calaamado cajiib ah iyo mucjisooyin horseed u yeeshay waddan dhib ku haystay xukunkii Rooma inuu fadhiisto oo uu digtoonaado. Tani waa hal sabab oo Ciise ugu qasbay inuu cadeeyo waxa uu ula jeedo Boqortooyada Ilaah. Yuhuudda wakhtigii Ciise waxay sugayeen hoggaamiye u soo celin kara ammaanta Daa'uud iyo Sulaymaan ummaddooda. Laakiin farriinta Ciise waxay ahayd "laba kacaan", sida ay qortay cilmiga Oxford "NT Wright". Marka hore, wuxuu qaatay filashooyinka caanka ah ee ah in nin suufiyad Yuhuudi ahi daadinayo harqoodkii Roomaanka wuxuuna u rogay wax gabi ahaanba ka duwan. Wuxuu ka dhigay rajada baahsan ee xoreynta siyaasadeed fariin badbaadada ruuxiga ah: injiilka!
"Boqortooyada Ilaah waa timid, wuxuu umuuqday inuu dhaho, laakiin maahan waxaad u maleysay inay taasi tahay". Ciise dadka wuu la yaabay natiijada ka soo baxday warkiisa wanaagsan. "Laakiin qaar badan oo ah kuwa ugu horreeya ayaa ugu dambayn doona kuwa ugudambaystauna waxay noqon doonaan kuwa ugu horreeya» (Matayos 19,30).
Markaasuu wuxuu ku yidhi walaalihiis, haddaba waxaa jiri doonta baroor iyo ilko jirriqsi, laakiin haddaad aragto Ibraahim, Isxaaq iyo Yacquub iyo nebiyada oo dhan oo boqortooyadii Ilaah ku jirta, laakiin waa laydinku kaxayn doonaa (Luukos 13,28).
Karaamadii weynayd ee qof walbaa u jiray (Luukos 14,16-24). Dadka aan Yuhuudda ahayn ayaa sidoo kale lagu casuumay Boqortooyada Ilaah. Marka labaadna ma ahaa kacaan kayar.
Nebi Naasared wuxuu umuuqday inuu waqti badan u leeyahay dadka sharci laawayaasha ah - min baraska iyo curyaanka ilaa cashuurqaadayaasha - iyo mararka qaar xitaa cadaawada Roman neceb. Warka wanaagsan ee Ciise keenay wuxuu ka hor imaanayaa wax kasta oo laga filayo, xitaa kuwa xertiisa aaminka ah (Luukos 9,51-56). Mar labaad iyo mar labaad Ciise wuxuu sheegay in boqortooyadii ay filayeen mustaqbalka ay durbadiiba si firfircoon uga dhex muuqan jireen shaqadiisa. Dhacdo xiisa leh ka dib ayuu yidhi: "Laakiin haddaan jinniyada ku saaro farta Ilaah, markaas boqortooyada Ilaah waa kuu timid" (Luukos 11,20). Si kale haddii loo dhigo, dadkii arkay shaqadii Ciise waxay arkeen mustaqbalka xaadirka. Ciise wuxuu u rogay filashooyinka caanka ah ugu yaraan saddex siyaabood:
Ciise wuxuu baray warka wanaagsan ee ah in Boqortooyada Ilaah ay tahay hadiyad saafi ah - ciisiimada Eebbe oo mar hore daawo u keentay. Tani waa sida Ciise u bilaabay "Sannadka naxariista Eebbe" (Luukos 4,19:61,1; Ishacyaah 2). Laakiin kuwa shaqeeya oo culays badan, masaakiinta iyo tuugannada, carruurtii khafiifka ahayd iyo cashuurqaadayaashii toobadkeenay, dhilladii toobadkeenay iyo dibeddii bulshada ayaa lagu "aqbaley" Boqortooyada. Idaha madow iyo idaha ruuxa lumay, wuxuu ku dhawaaqay isu-ilaaliye.
Warka wanaagsan ee Ciise ayaa sidoo kale u jiray kuwa diyaar u ahaa inay Ilaah ugu toobadkeenaan tawbadkeenka dhabta ah. Dembiilayaashan dembiga leh ee toobad keena waxay Ilaahay ka helayaan aabbe deeqsinimo ah oo raadiya dariiqa wiilashiisa iyo gabdhihii wareegayay oo arkaa markay iyagu "weli fogyihiin" (Luukos 15,20). Warka wanaagsan ee injiilku wuxuu la macno yahay qof kasta oo qalbiga ka dhaha: «Ilaah ha u naxariisto dambiilayaal» (Luukos 18,13) iyo si daacad ah waxaa loola jeedaa inuu ka helayo maqal naxariis leh xagga Ilaah. Had iyo jeer. Weyddiista, waa lagu siin doonaa. doona oo waad heli doontaan; garaac, marka waa lagu furi doonaa » (Luukos 11,9). Kuwa rumeeyey ee ka leexday dariiqooyinka adduunka, waxay ahayd warka ugu wanaagsan ee ay maqli karaan.
Injiilka Ciise wuxuu sidoo kale macnaheedu ahaa inaysan jirin wax joojin kara guushii boqortooyadii ee uu Ciise keenay - xitaa haddii ay umuuqato mid kasoo horjeedda. Boqortooyadu waxay la kulmi doontaa qadhaadh, iska caabin aan naxariis lahayn, laakiin ugu dambeyntiina waxay ku guuleysan doontaa xoog ka sarraysa iyo ammaannimada.
Masiixu wuxuu xertiisii ​​ku yidhi: Laakiin goortii Wiilka Aadanahu ammaantiisa ku yimaado, isaga iyo malaa'igaha oo dhan isaga, wuxuu carshiga ammaantiisa ku fadhiisan doonaa dadka oo dhan hortiisana waa lagu soo wada ururin doonaa. Oo wuxuu u kala sooci doonaa sida adhijir adhiga uga soociyo riyaha. (Matayos 25,31: 32).
Markaa warka wanaagsan ee Ciise wuxuu lahaa xiisad firfircoon oo dhex martay "hore" iyo "weli ma". Injiilka boqortooyada waxaa lagu tilmaamaa boqortooyadii Ilaah, oo horey u jirtay - "Eeg kuwa indha la 'oo socodka curyaanka ah, baraska qaba daahir oo maqla dhagoolaha, kuwii dhintayna istaagaan, injiilkaana waa lagu wacdiyaa dadka masaakiinta ah" (Matayos 11,5).
Laakiin boqortooyadii "wali ma aha" halkaas iyada oo dareenka ah in fulinteeda oo dhami ay wali dhow tahay. Fahmitaanka injiilka macnihiisu waa fahanka labadan waji: dhinac marka la eego, joogitaanka ballanqaad ee boqorka, oo durba ku nool dadkiisa, iyo dhinaca kale, soo laabashadiisa cajiibka ah.
Bawlos Bawlos wuxuu gacan ka geystay kicinta Dhaqdhaqaaqa Weyn ee labaad ee Injiilka - oo ku faafay Yahuudda yari illaa adduun weynaha Giriig iyo Roomaanka ee bartamihii qarnigii koowaad. Bawlos, oo isu beddelay Masiixiyiinta Masiixiyiinta ah, wuxuu tooshka iftiinka iftiinka injiilka u leeyahay nolosha maalin walba. Isagoo amaanaya Masiixa ammaanta leh, wuxuu sidoo kale ka walaacsan yahay cawaaqibka waxqabadka leh ee injiilka. In kasta oo iska caabintii fanaaniinta ahayd, Bawlos wuxuu u gudbiyey dadka kale ee Masiixiyiinta ah micnaha nolosha ee nolosha Ciise, dhimashadiisa iyo sarakicistiisa: «Xitaa adiga oo mar ahaan jiray shisheeyayaal iyo cadawtinimo xagga shuqullada sharka ah, wuxuu hadda la heshiisiiyey geeridiisa dhimashadiisa si uu isagu Is hor dhig wejigiisa qoduus ah oo eedla'aan iyo eedla'aan; hadaad ku sii nagaadid iimaan, aasaas iyo adag, oo aadan ka noqon rajadii injiilkii aad maqashay oo lagu wacdiyo uunka samada ka hooseeya oo dhan. Anigoo Bawlos ah waxaan addoonkiisa u noqday » (Kolosay 1,21:23 iyo). Heshii. Hufan. Grace. Madaxfurashada. Dambi dhaaf. Mana aha oo kaliya mustaqbalka, laakiin halkan iyo hadda. Taasi waa injiilka Bawlos.
Sarakicidda, gogol ay u fadhiyaan aqoonyahannada iyo Johannes ayaa u horseeday akhristayaasheeda (Yooxanaa 20,31), wuxuu siidaayaa awoodda gudaha ee injiilka nolosha maalinlaha ah ee Masiixiyiinta. Sarakicidda Masiixu waxay xaqiijisaa injiilka.
Sidaa darteed, sidaas darteed Bawlos wuxuu barayaa, dhacdooyinkaas ka dhacay Yahuudiya fog waxay rajo gelinayaan dadka oo dhan: «Kama xishoodo injiilka; maxaa yeelay, waa xoogga Ilaah oo barakeeyo kuwa isaga rumeeyey oo dhan, marka hore Yuhuudda iyo Gariigta sidoo kale. Sababtoo ah waxay muujineysaa xaqnimada ka hor timaada Ilaah, oo ka timaada iimaanka xagga rumaysadka ». (Rooma 1,16-17).
Rasuul Yooxanaa wuxuu ku darsaday aragti kale injiilka. Waxay tusinaysaa Ciise siduu «xerta u jeclaa» (Yooxanaa 19,26), wuu xasuustay, nin qalbigiisu adhijir yahay, hoggaamiye kaniisad lehna jacayl aad u qoto dheer dadka qaba welwelkooda iyo cabsidooda.
Waxaa jiray calaamooyin kale oo badan oo Ciise sameeyey xertiisii ​​hortooda oo aan ku qorin buuggan. Laakiin kuwan waxaa loo qoray si aad u rumaysan kartaan inuu Ciise yahay Masiixa, Wiilka Ilaah, iyo inaad nolosha ku lahaatid magiciisa xagga rumaysadka » (Yooxanaa 20,30-31).
Soojeedinta injiilka ee qaybta John ayaa udub dhexaad u ah odhaahda la yaabka leh: "si aad nolosha ugu heshid iimaan". Yooxanaa si mucjiso ah ayuu u gudbinayaa waji kale oo injiilka: ciise masiixi waqtiyo isku dhow oo shaqsiyan aad u wanaagsan. Yooxanaa wuxuu ka bixiyaa xisaabtanka nololeed ee shaqsi ahaaneed, joogitaanka Masiixa.
Injiilka Yooxanaa waxaan kula kulannay Masiixa oo ahaa wacdiye caan ah oo awood badan (Yooxanaa 7,37-46). Waxaan aragnay Ciise oo diirran oo soo dhoweyn leh. Ka soo casuumadkiisii ​​casuumadda "Kaalay oo arag!" (Yooxanaa 1,39) ilaa loolanka loogu jiro Thomas ee shakiga gelinaya inuu fartiisa farta u geliyo dhaleeceynta gacmihiisa (Yooxanaa 20,27), sawirkii noqday hilibka oo ku dhex noolaa waa wax aan la ilaawi karin (Yooxanaa 1,14).
Dadku waxay dareemayeen soo dhaweyn iyo raaxo leh Ciise in ay isweydaarsi nool la yeeshaan isaga (Yooxanaa 6,58). Way ag jiifsadeen isaga oo wax cunaya oo wax isla cunaya isla saxan (Yooxanaa 13,23-26). Waxay si aad ah u jeclaayeen isla markii ay arkeen isaga oo ku dul liqaaya banka si ay u cunaan kalluunka uu isagu isku shiilay (Yooxanaa 21,7-14).
Injiilka Yooxanaa wuxuu ina xusuusinayaa inta injiilku ku tiirsan yahay Ciise Masiix, tusaaladiisa, iyo nolosha weligeed ah ee aan ku helno isaga (Yooxanaa 10,10).
Waxay ina xusuusineysaa in wacdinta injiilka aan ku filnayn. Waa inaan sidoo kale ku noolaano. Rasuul Johan nes wuxuu nagu dhiirrigeliyay: Tusaalaheenna wuxuu ka dhaadhicin karaa dadka kale inay la wadaagaan injiilka Boqortooyada. Tani waa waxa ku dhacay haweeneyda reer Samaariya ah oo ceelka Ciise kula kulantay (Yooxanaa 4,27-30), iyo Maria von Magdala (Yooxanaa 20,10-18).
Kii ku ooyay xabaashii Laasaros, oo ahaa addoonkii is-hoosaysiinta oo cagihiisa xertiisii ​​maydhay, weli waa nool yahay maanta. Wuxuu ina siiyaa joogitaankiisa Ruuxa Quduuska ah:
Ku alla kii i jecel, ereygaygay xajin doonaa, aabbahayna waa jeclaan doonaa isaga, oo isagaannu u tag doonnaa oo aannu la noolaan doonnaa ... Qalbigaagu ma cabsan doono, mana cabsan doono » (Yooxanaa 14,23:27 iyo).